Android အတွက် USB OTG ဖိုင်မန်နေဂျာ APK ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » USB မှတ် OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
USB မှတ် OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က APK ကို
USB မှတ် OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုသငျသညျမဆို USB မှတ်ဖုန်းများအတွက်ဖိုင်များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကူးယူခွင့်ပြုပါတယ်။
USB မှတ် OTG Explorer ကို - ဟာ android များအတွက် OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုသင့်စက်ကို, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းရဲ့ USB အ OTG ဆိပ်ကမ်းကို အသုံးပြု. FAT32 သို့မဟုတ် NTFS file system ကိုအတူမဆို USB ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်သိုလှောင်မှုကိရိယာမှဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင်အလွယ်တကူဖိုင်တွေ Tablet ကို ( .. ဖိုင်တွေစသည်တို့ delete, ဖိုလ်ဒါကိုထည့်သွင်း, အမည်ပြောင်း), သင့်ရဲ့ Android Phone ကိုမဆို USB ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာထဲကနေကူးယူနိုင်ပါတယ်
အကောင်းဆုံးကို USB OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုသင့်စက်ကို, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းရဲ့ USB အ OTG ဆိပ်ကမ်းကို အသုံးပြု. FAT32 သို့မဟုတ် NTFS file system ကိုအတူမဆို USB ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်သိုလှောင်မှုကိရိယာမှဖိုင်များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကူးယူခွင့်ပြုပါတယ်။
OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကိုအင်္ဂါရပ်များ
Audio: - သင်ကအားလုံးဂီတကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဖိုင်တွေအသံနိုင်ပါတယ်။ (ထောက်ပံ့ဖိုင် Format: mp3, ogg, FLAC, m4p, WAV, WMA နှင့်စသည်တို့ကို) ။
လျှောက်လွှာ: - Uninstall ကို applications များကဲ့သို့အ OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကိုထောက်ခံမှု application ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, လျှောက်လွှာကိုဖျက်နှင့် system app ကိုနှင့်အသုံးပြုသူ app ကို install လုပ်နဲ့တူ application ကိုစီမံခန့်ခွဲ။
File Transfer: - OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကိုထောက်ခံမှုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ applications များချိတ်ဆက်သင်ဟာ NAS နှင့် FTP ဆာဗာများကဲ့သို့ဝေးလံခေါင်ဖျားသို့မဟုတ် shared သိုလှောင်မှုကိုရယူနိုငျပါသညျ။
ပုံရိပ်တွေ: - သင်ကသင့်ရဲ့သိုလှောင်မှုအတွက်ပုံရိပ်နှင့်ရုပ်ပုံဖိုင်များကိုစီမံနိုင်သည်။ Image ကို preview ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ (ထောက်ပံ့ဖိုင် Format: bmp, gif, jpg, png နဲ့စသည်တို့) ။
စာရွက်စာတမ်းများ: - သင်ကသင့်ရဲ့ device ကိုအားလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းဖိုင်တွေစီမံနိုင်သည်။ (ထောက်ပံ့ဖိုင် Format: doc, ppt, pdf, နှင့်စသည်တို့) ။
Videos မ: - သင်ကသင့်ရဲ့ device ကိုအားလုံးကိုဗီဒီယိုဖိုင်များစီမံနိုင်သည်။ (ထောက်ပံ့ဖိုင် Format: asf, AVI, FLV, mp4, MPEG, WMV နှင့်စသည်တို့ကို) ။
File Browser: - OTG ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကိုသငျသညျထိထိရောက်ရောက်အားလုံးသင့်ဖိုင်များစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးသည်! တစ်ခုအလိုလိုသိ interface ကိုအတူ, ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကသင်သည်မည်သည့်ဖိုင်ကိုင်တွယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့သင့်ရဲ့ device, MicroSD card ကို, ဒါမှမဟုတ် Cloud သိုလှောင်မှုအကောင့်ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်ရှိမရှိဖိုင်တွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီ app ကို အသုံးပြု. မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့ထိုသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်!
4.27 ကို MB